Semalt: WordPress Themes - Tsara ve ny manova azy ireo?
Raha manana tranonkala ianao ary mahita ny tontolon'ny WordPress vaovao izay toa tsara sy tsara kokoa noho ny lohahevitra teo aloha, dia tsy maintsy manova azy haingana araka izay tratra ianao. Raha matahotra ianao fa ny fanovana ny loha-hevitra WordPress dia hahatonga anao ho very ny votoatiny na ny safidinao, dia diso tanteraka ianao. Ny tanjon'ireo WordPress dia mikendry ny hanome ny tranokalantsika sy ny bilaogy tsy mampino, fa tsy manelingelina ny fanovana sy ny toerana misy ny votoatintsika.
Ny fitambaran-kery dia toerana ahitanao marobe maromaro, ary ny ampahany tsara indrindra dia tsy mila manahy mikasika ny fahaverezan'ny hafatrao, sary, pejy ary horonam-peo. Ny votoatiny rehetra dia voarakitra soa aman-tsara ao amin'ny daty WordPress, ary ny lohahevitra vaovao dia tsy hamaha olana ho anao.
I Ivan Konovalov, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia hijery eto dia zavatra roa tokony hijerena rehefa manova ny loha-hevitra WordPress ianao.
Tahirin'ny lahatsoratra manokana:
Raha nampiasa ilay lohahevitra izay mamorona karazana postage ianao, dia mety ho hitanao fa ny ankamaroan'ny hafatrao dia manjavona avy hatrany. Saingy tsy misy zavatra tokony hatahoranao satria ny karazana posto dia hampiseho ny top menu ao amin'ny kaontinao WordPress. Midika izany fa afaka mamerina mora foana ny rakitrao ianao ary afaka manao ny asan'ny tranonkala araka ny tokony ho izy..Ny fijoroana vavolombelona Customer or Galleries dia ireo karazana hafatra roa tokony hampidirinao. Avelao aho hilaza aminao fa ny Postmatic, Surf Office, Yeah Dave, ary ireo orinasa an'arivony toa mitantana ny tranonkalany amin'ny Make, WordPress iray izay samy matihanina sy mahasoa.
Raha nanova ny WordPress ianao dia azonao atao ny manangana ny menus manokana. Noho izany dia tsy maintsy mamorona azy ireo ianao amin'ny Sehatr'Ilay Appearance → Menus. Manampy amin'ny fanaraha-maso ny fampisehoana ny menokan'ny naviganao izany ary miasa ho sehatra mahomby fanampiny. Rehefa manova ny loha-hevitra WordPress ianao, dia ataovy izay hametrahanao ny menus manokana ary esory ny menus rehetra izay tsy ampiasaina ary nanjavona tamin'ny loha-hevitra vaovao. Tsy maintsy omena toerana misy anao manokana ny menus vaovao raha vao miova ny foto-kevitrao satria ny lohahevitra rehetra dia hametraka ny menus rehetra amin'ny toerana misy azy, manelingelina ny fijery ny habaka.
Tahaka ny menus, ny widgets dia hijaly noho ny olana amin'ny toerana niova. Ny loha-hevitra Wordpress dia natao hampiseho ny habaka rehetra azo jerena, ary raha tianao ny manafina na mampiseho widgets vaovao, dia tsy maintsy manao izany amin'ny fomba mahazatra ianao. Azonao atao ny manamboatra ny widgets amin'ny alàlan'ny fantsona mankany amin'ny fizarana → Widgets. Raha mampiasa Mac ianao dia azonao atao ny maka ny sarin'ny efijery manontolo amin'ny fanosehana Shift + Cmd + 3.
Ahoana no fanandramantsika fanovana WordPress?
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy mora indrindra hijerena ny lohahevitry ny WordPress dia ny fampiasana ny safidin'ny Preview ao amin'ny pejy Appearance → Themes. Avelao aho hilaza aminareo fa tsy afaka manome valiny marina foana io safidy io, ka mety hamoaka ny loha-hevitrao ianao mba hanamarina raha tsara ho an'ny tranokalanao na bilaogy izany na tsia.
Famaranana - Ny fanovana dia tsara:
Marina fa ny fanovàna ny loha-hevitra WordPress dia tsara satria hihaona hatrany hatrany ny olona. Ny lohahevitra vaovao dia manome ny toetranao vaovao sy ny toetra mahavariana anao. Amin'izany fotoana izany, tokony hamerina ny rakitrao ianao ary vonona ny hanaiky ny fijery vaovao amin'ny tranokalan'ny WordPress Source .